Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Abadwebi abaziwayo
Ngaba isicatshulwa sikaLucian Freud sokupenda esilungele umfanekiso wesigodlo?
ULucian Freud wayevame ukuchazwa nje ngokuba nguBritani obalaseleyo. Ngaloo nto yayimangalisi ukuba uEkazikazi uElizabethe II avume isicelo sakhe sokupenda umfanekiso wakhe? Emva koko, ookumkani baye bahlala bevezwe ngabaculi bezithombe ezihamba phambili ngexesha labo. UKumkani uHenry VIII wayetywe nguHolbein, uCharles V nguTiti, uCharles I nguVan Dyck, noFilipu IV waseSpain nguVelázquez ukubiza kodwa bambalwa.
Umzobo ngokwawo uncinci kakhulu, iithandathu ngeesentimitha ezilisithoba (malunga ne-15 ngamasentimitha angu-22). Akuzange kuthunyelwe, kodwa kwenziwa kwisicelo sikaLucian Freud njengesipho kuKumkanikazi. Omnye unokucinga nje ukuba wayeqhelene nesitayela sikaLucian Freud kwaye wayesazi oko wayezivumela.
Abanye abagxeki bepeyinti babonakala bexhamle uLucian Freud wayenobungqina bokupenda umlawuli wakhe ngendlela eqhelekileyo, isicatshulwa. Iphephandaba laseLanga , lingazange likwazi ngokuthetha kwayo, lichaza "njengento ephazamisayo" esithi Freud kufanele 'ivalwe kwiNqabayo' yalo. Umhleli weBritish Art Journal wacatshulwe esithi: "Uyenza ibonakale njengenye ye-corgis yobukhosi oye wahlaselwa yintlungu."
ULucian Freud wayeyaziwa ngokufuna iindawo zokuhlala ukuze eze kwi studio yakhe, kwiiseshoni ezininzi. Kucacile ukuba awuxeleli inkosi yakho ukuba eze kwi studio yakho; Kunoko, iintlanganiso zenzeka eSt James Palace, phakathi kukaMeyi 2000 noDisemba 2001.
Kwesicelo sikaFreud, u-Queen wayegqoke isithsaba sedayim eyaziwa ngokuvulwa kwepalamente yaseBrithani nakwimifanekiso yakhe kwisitampu kunye namanqaku ebhanki. UFranud wacatshulwa esithi le nto ingenxa yokuba "wayesoloko ethanda indlela intloko yakhe ibheka ngayo izitampu, egqoke isithsaba" kwaye "wayefuna ukubhekiselele kwisimo esingaqhelekanga ayenayo, sokuba yinkosi."
ULucian Freud uye wachaza imifanekiso yakhe "njengento yokuthetha inyaniso." Yaye inyaniso yembandela kukuba ukumkani waseBrithani akayintombazana. Ingaba ucinga ukuba umzobo kaLucian Freud uyintloni okanye i-masterpiece iya kuxhomekeka ekubeni ungayithandi indlela yakhe yokudweba enamandla. Kwaye mhlawumbi malunga nokuba ucinga ukuba kufanelekile kukumkani. Ngokuqinisekileyo kuyahluke kakhulu kwiminyaka edlulileyo, emininzi yemveli yobukhosi.
Umfanekiso kaLucian Freud uye wangena kwi-Queen's Gallery, iBuckingham Palace, eLondon.
10 Amazwi ngoLeonardo da Vinci
I-Italian Slang Dictionary Amagama Adala 'A'
I-Beringian Yenza i-Hypothesis: Ingqwalasela
Ibhishophu uJohn Shelby Spong Quotes kwiNkolo kunye neNkcubeko
Indlela yokudibanisa isenzi esithi "Aspettare" ngesiTaliyane
Indlela yokwenza ibhokhwe ye-smoke ngeBing Pong Balls
Indlela yokuphucula i-Ford Mustang Gas Mileage